မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ရွှေကျင်ဆရာတော်ကို သာသနာပိုင် မောင်းထောင်ဆရာတော်က သုဓမ္မာသို့ ဆင့်ခေါ်ရာ ရွှေကျင်ဆရာတော် ကြွတော်မမူ။ သာသနာပိုင် အမိန့်နှင့် ကြွစေရန် မဟာဒါန်ဝန်က အတင်းစီမံတော်မူခြင်းကို ရှင်ဘုရင် သိလျှင် ရွှေကျင်ဆရာတော်ကို သုဓမ္မာမှ သီးခြား ရှိပါစေ အမိန့်ပေးသဖြင့် ဂဏဝိမုတ် သီးခြား ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဟူ၍ ပေါ်ပါတယ်။ ရွှေကျင်ဆရာတော့် အဆုံးအမအောက်မှ ရှိတဲ့ ရဟန်းသာမဏေတွေလဲ သုဓမ္မာက ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဟာ ရပ်ရေး၊ ရွာမှု၊ organized monastic institutions တွေမှာ ဝင်မပါဘဲ ဝိနည်းတင်းတင်းလေးစားပြီး “အရညဂတာနံဝါ” မင်းအစိုးရအာဏာစက်အသင်းအပင်းမှ ဝေးရာမှာ နေတဲ့ သံဃာဂိုဏ်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းတလျှောက် ကြည့်ရင် ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးခေတ်တွေမှာ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းသံဃာများ မင်းရေး စိုးခွင်၊ လူမှုရေး မရောနှောဘဲ သီးသီးသန့်သန့်နေပါတယ်။ ဒါဟာ သာသနာလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လုိုက်မယ်။ ဘုရားအလိုကျနေမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းရဲ့အနှစ်အသားပါပဲ။ (secular trend နဲ့လဲ နီးတယ်။) မင်းတုန်းမင်းကောင်းမှုနဲ့ ရလာတဲ့ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ဗိုလ်နေဝင်းခေတ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာတွေကို မဟန နဲ့ ထိန်းဖုို့ လုပ်တဲ့အခါမှ ပျက်ပါတယ်။
ပြောလိုတာကတော့ လူမှုရေး အသားပေး၊ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလုိုက်၊ ဘယ်သူကိုတော့ သမတလုပ်စေချင်တယ် ဘာညာလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးမျိုး သူ့ဟာသူ ပြောတာ လုပ်တာ နေတာ ထုိုင်တာ ဘာမှ မှတ်ချက်မပေးလိုပါ။ သို့သော် သမုိုင်းတလျှောက် လူမှုရေး၊ ရပ်ရေး ရွာမှု၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းအောင်နေလာတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်း သာသနာပိုင်၊ တွဲဖက်သာသနာပိုင် ရာထူးနဲ့တော့ ထိုက်တန်တယ် မထင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ထင်ရှားစေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (အဆက်ဆက် သာသနာပိုင်တွေ တွဲဖက်သာသနာပိုင်တွေရဲ့အာစရိယဝံသ၊ အာစရိယဝါဒကိုလဲ ပြန်ကြည့်ကြပါ။)
Htet MinlwinYesterday at 7:54pm · Edited ·
January 29 at 6:38pm ·
ရွှေကျင်ဂိုဏ်းအစည်းအဝေး စတဲ့နေ့ကပဲ ဒီစတေးတပ်စ်ကို ကျနော် ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on January 31, 2015 at 1:54 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
Zaifo Dinn Says:
February 21, 2015 at 1:59 pm | Reply
I don’t sent my blog to anyone.